Saaxiibtayda waxaa ku dhacay dhiigeeda caadada. Waxayna doonaysaa in ay hadda galmo ila samayso. Midaasi caadi miyaa? Ayadu waa mid aan nadiif ahayn wakhtigaan. – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 14-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibkayga. Ma aynaan isticmaalin wax uurka ilaaliya. Wuxuu i leeyahay in aanan uur qaadaynin. Maadaama aanan weli ii imaanin dhiigayga caadada. Run miyaa midaasi?
Next Next post: Anigu waxaan ahay 14 sanno jir. Waxaan u isticmaalay tamboonooyin dhiigayga caadada dhowr bilood. Shalay waxaan iloobay in uu hoosta iigu xiranyahay tambooni kadibna waxaan xirtay tambooni cusub. Hadda ma awoodo in aan banaanka usoo saaro tamboonahaygii hore. Maxaan sameeyaa?